ALATSINAINY 15 JOLAY 2019
TAORIAN’NY VOKA-PIFIDIANANA : « Milamina ny tanàna, tony ny raharaham-pirenena »
“Milamina ny tanàna”, araka ny fiteny mahazatra eny anivon’ny fiarahamonina. Amin’izao andro vitsy taorian’ny nivoahan’ny voka-pifidianana ofisialy izao dia azo lazaina ho milamina ny firenena, tony ho azy ireo raharaha nafampana teo aloha. 10 janvier 2019
Nanaiky ary samy niondrika teo anatrehan’ny didy tsy azo ivalozana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny rehetra. Iny voka-pifidianana ofisialy iny no nandrasana dia azo lazaina ho nilamina tanteraka ny firenena. Nangina avokoa ireo fihantsiana maro samihafa re mialoha ny andron’ny 8 janoary, daty nanambaràna tamin’ny fomba ofisialy ny fandresen’ny Filoha Andry Rajoelina.
Herinandro iray monja talohan’io no nirefotra isan’andro ny baomba mandatsa-dranomaso tetsy Analakely nanoloana ny hetsika nataon’ireo mpomba ny Kandidà Ravalomanana Marc. Tao anatin’ny fitaintainan-dava no niainan’ireo mponina manodidina an’Analakely indrindra fa ireo mpivarotra teny an-toerana noho ny fifandonana nisesy teo amin’ireo mpitandro filaminana nanatanteraka baiko sy ireo mpanao fihetsiketsehana.
Ankilany, nahazo toerana ny fihantsiana sy fandranitana teo anivon’ny haino aman-jery nanohana an’iny hetsika iny izay anisany niteraka fanakorontanana saim-bahoaka ihany koa noho ireo vaovao tsy marina marobe naely tetsy sy teroa. Soa ihany fa hentitra tamin’ny fandraisana andraikitra ny teo anivon’ny governemanta. Nandritra ny lanonam-pitsarana nanambarana tamin’ny fomba ofisialy iny voka-pifidianana iny izay nisian’ny fifandraisan-tanana teo amin’ireo Kandidà roa mpifanandrina no niantombohan’ny fitoniana voalohany indrindra. Taorian’izay nanao fanambaràna manokana mihitsy ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc izay nanaiky ny fahareseny ary nitondra ny teny fiarahabana sy firariantsoa ho an’ny Filoham-pirenena vaovao.
Hatramin’ireo olona nanara-dia azy sy niezaka nanaratsy hatramin’ny farany ny Filoha Andry Rajoelina toa an-dry Rolly Mercia, Mbola Rajaonah aza dia nandefa izay teny fiarahabana izay avokoa tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “facebook”. Milamina tanteraka ny tanàna ankehitriny, azo lazaina ho tony ny raharaham-pirenena satria tsy nisy intsony ny korontana fa samy nanaiky ny didy navoakan’ny HCC ny rehetra. Hatramin’ny vondrona iraisam-pirenena dia efa nanaiky ny maha Filoham-pirenena voafidim-bahoaka an’i Andry Rajoelina, ary niaiky fa nizotra tamim-pilaminana tanteraka iny fifidianana iny.
Amin’ izao fotoana izao, ao anatin’ny fitoniana tanteraka no iandrasan’ny vahoaka malagasy ny fianianana hataon’ny Filoham-pirenena vaovao sy ny fifamindram-pahefana eo aminy sy ny Filoha teo.
Raim-pianakaviana iray matin’ny fanafody mampihenjana MORAFENO - TOAMASINA (237) 10 juillet 2019 Tratra tao Toliara i Jibril izay nahavanon-doza FANDATSAHAN’AINA AN’I GAEL TENY 67 HA (183) 9 juillet 2019 Voasambotra teny Anosizato ny jiolahy iray FANENDAHANA NIAMPY FANOLANANA (147) 10 juillet 2019 Mpandeha miisa 14 naratra mafy LOZAM-PIARAKIODIA TAO TOLIARA (111) 10 juillet 2019 Sinoa mibodo tanin’olona nitory ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ADY TANY AO FARAHALANA - SAMBAVA (88) 10 juillet 2019 Saron’ny zandary tao Ambohimanga Rova ilay tambajotra goavana OMBY HALATRA (75) 12 juillet 2019